( ရွာနှင့်ဦးပေါ့လေ ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » ( ရွာနှင့်ဦးပေါ့လေ )	15
( ရွာနှင့်ဦးပေါ့လေ )
Posted by တောင်ပေါ်သား on Jun 12, 2015 in Creative Writing, Poetry | 15 comments
သမီးရည်းစားနှစ်ယောက် ရူးလောက်အောင် ပျော်ခဲ့ကြ
တစ်သက်လုံးမြဲမယ့် အတွေးနဲ့ အချစ်တွေ နယ်ချဲ့ခဲ့သပေါ့လေ ၊
မိုးစိုမှာစိုးသူက သူ့ကိုပိုက်ထွေး အို နွေးလိုက်တာ တဲ့ ၊
ဒီလိုနဲ့ နေ့ရက်တွေဖြတ်သန်း နောက်နှစ်ဆန်းမှာတော့
ကံပဲပေါ့ဆိုတဲ့ စကားနဲ့ ထားခဲ့တဲ့မင်း
ဒီလို တစ်သားတည်းလား များခဲ့တဲ့အတွေးတွေနဲ့
ညစ်လေတဲ့ မင်းလိုလူအတွက် အခန်းဆက်စရာမလို
မင်းသင်သွားတဲ့ မာယာအတတ် ငါ အခါခါမှတ်ခဲ့
ငါ ညှာလိမ့်မယ် မထင်နဲ့နော် ၊
ကြောင်ဝတုတ် says: ဟိုသီချင်းလေးသွားသတိရသဗျာ…
ဘာတဲ့…. ကြီးမှဝက်သက်ပေါက်ရင် သတိထားဆိုလားပဲ…
ကျုပ်တို့ရွာသားကြီး နုချက်ကတော့ဗျာ… သတိထားရမယ့်အဆင့်…
တောင်ပေါ်သား says: ဝက်သက်လောက်တော့ စာမဖွဲ့ပါဘူး ဖက်ဖက်ကက်ရယ် ၊ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1608
ကြောင်ဝတုတ် says: ၀က်သက်မဟုတ်ရင်တော့ စိတ်ပိုပူရပြီဗျို့… အဲဒါ… HIV Positive…
ကဗျာလေးကို ဖတ်ရင်းရင်ဘတ်ခြင်းထပ်တူ ခံစားသွားပါကြောင်း…
တောင်ပေါ်သား says: HIV တော့ လုံးဝ ရှင်းကြောင်း ကောမန့်အတွက် ကျေးဇူးဗျို့
sorrow says: ဘာဗျ…. ဒီမယ် ကိုကြီးဖက်ကတ်… အားမပေးချင်နေပါ… လူတဖက်သားကို အားလျော့အောင်မပြောပါနဲ့ … အဆင်းလေး ဘီးတပ်ပေးမယ်မရှိဘူး .အဟိဟိ …အစ်ကို မျိုး ..ကျွန်တော်အားပေးတယ် ..အချစ်ဆိုတာ အမြဲလတ်ဆတ်စိမ်းလန်းနေတဲ့အရာဗျ….
manawphyulay says: အေးလေဟယ်… ထူးအယ်လင်းတောင် အချစ်သစ်တွေ့ပြီဆိုပဲ… :P
မြစပဲရိုး says: ဖျား .. ဖျား ..
နဲနဲ တော့ လျှော့ပါ ကိုမျိုးရာ။
အဲလို အကြိမ်းကြမ်းရင် တကယ်လဲ တွေ့ရော။ မင်း သဘော ဖြစ်တာပါဘဲ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1910
တောင်ပေါ်သား says: အရီးကလည်းဗျာ
ဒါက ကဗျာပါ ၊ ဒီလိုခံခဲ့ရဘူးသူတွေကိုယ်စားပေါ့ ၊
Alinsett @ Maung Thura says: ဒီမိုး…. ဒီမိုး…. ဒီမိုးသည်းတဲ့နေ့တွေ… ဒန်တန့်တမ်…
sorrow says: .. အစ်ကိုမျိုးကို တစိုက်မတ်မတ်အားပေးနေရခြင်းအကြောင်းက စိတ်ဓါတ်လေးသဘောကျလို့ခင်ဗျ …
..လုပ်ငန်းတခုရဲ့အောင်မြင်ခြင်းအခရာက … ရယူပိုင်ဆိုင်ချင်တဲ့စိတ်ခင်ဗျ…. ဆိုတော့ကာ … …ရချင်တဲ့စိတ်ရှိပြီး ထိုက်တန်တဲ့လုံ့လရှိခဲ့ရင် … မလွဲမသေရမှာဖြစ်ကြောင်း …အဟိဟိဟိ
ဒီရွာသားတွေ ကိုမကြိုက်တာအဲ့တာပဲ ..အလကားလိုက်ပူပင်နေကြတယ်… အချစ်ရဲ့အသီးပွင့်တွေကို
..နားမလည်ကြဘူး …အဟိဟိဟိ ..ဟိုတိုင်းတပါးက အန်တီကြီးအဆိုးဆုံး ..
မြစပဲရိုး says: မင်း လေယာဉ် မှာ ဘီးတွေ ကိုတစ်ချိန်လုံး မသုံးရတိုင်း သူများ ကို သွားပြီး ဘီးတပ် ပေးနေတယ်။
. ဖြူဖွေး ကိုတွေ့အောင်ရှာပြီး ပညာပေးခိုင်းဦးမှပါဘဲ။ :-)))
တောင်ပေါ်သား says: ကချင်ကြီး နဲ့ အရီးရေ
sorrow says: ..အရီးလေးကလဲ ချစ်လို့စတာကြီးကို . အဟိဟိ ..အစ်ကိုမျိုး ကျွန်တော်မပါတော့ဘူး ..အဟီး
Mike says: .ဆွဲထားဆရာရေ…ရာသီဥတုကလည်းကိုယ့်ဖက်မှာဆိုတော့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1684